UZaria Forman kunye neendawo zakhe ezintle ezinqabileyo | Izidalwa ezikwi-Intanethi
UZaria Forman kunye nenkqubo yakhe yoyilo ngekhekhe
UZaria Forman kwakukule ndlela ukumthiya igama njengegcisa lomkhenkce. Kumsebenzi wakhe Sifumana icebergs bonke ubukhulu ukuba siqokelele ngela xesha ukusishiya sibhidekile ngonyango olumnandi kubuchule bakhe kunye nekhekhe ukwenza uthotho lwemisebenzi.
Ukuba izolo besikunye naye ikeyiki yerosemary, yayilixesha leForman kwaye yazi inxenye yesifundo sakhe ngaxeshanye nenkqubo yoyilo kwimisebenzi yakhe. Umzobi ovula indlela eya kwindawo yakhe ekhethekileyo apho asebenza khona ngobuninzi bemisebenzi kwaye kuvela kobandayo kunye nelaa qhwa njengeyona nto iphambili ngaphandle kokulibala olo lwandle lujikeleze ezo ziqwenga zomkhenkce.
Asinalo ithuba lokudibana naye buqu, kodwa sinethamsanqa lokungena kwindawo yakhe ukuze siqhubeke nokumangaliswa bubugcisa bakhe. Uluhlu lwakho lweekeyiki baya kwiithoni ezibandayo njengoko kubonisiwe kumfanekiso okwabelwana ngawo.
Kubonakala isongelwe nge-350.org, intshukumo yehlabathi yemozulu kwaye iyasebenza kumazwe angaphezu kwe-188. Eminye yemisebenzi yakhe yanikelwa kubutshantliziyo obunxulumene notshintsho lwemozulu. Kulapha kanye apho umsebenzi wakhe uye ubaluleke ngakumbi njengoko sisondela kumaqondo obushushu aphezulu ahambelana nokufudumala komhlaba esizifumana sikuso.
Kulapha apho sikwafumana ezona njongo zakhe zokwenyani, kuba ngokwento ayithethileyo yinxalenye yayo iinzame zakho zokuthatha inxaxheba kuluntu lwehlabathi. Kwisifundo sakhe ukwasibonisa inxenye yolawulo lwakhe kunye nekhekhe apho kungekho mda ungako wempazamo, kwaye kungoko kanye kwezi mpazamo apho "esebenza" ukuzama ukuzisombulula ngaphakathi kwemida ethile.
Unayo iwebhusayithi yakho, facebook wakho y I-instagram yakhe for landela imihlaba yabo engumkhenkce kwaye kubanda kwenziwa ikhekhe.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » UZaria Forman kunye nenkqubo yakhe yoyilo ngekhekhe